Abathengisi beB2B bafumana impumelelo ngeNtengiso yeKhontenti | Martech Zone
Abathengisi be-B2B bafumana iMpumelelo ngeNtengiso yeKhontenti
NgoLwesithathu, Novemba 6, 2013 UKelsey Cox
Unyaka nonyaka, isixa semali esityaliweyo ukuthengiswa kokuqukethwe amacebo abonakala ngathi ayenyuka. Ngokukodwa, abathengisi bemixholo ye-B2B bafuna ukufumana ulwazi ngophawu, ukuvelisa okukhokelayo, ukufunyanwa kwabathengi kunye nokunyaniseka, ukugcwala kwiwebhusayithi, kunye nokuthengisa ngokudala umxholo wabo. Njengoko abathengisi bafumana i-savvy ngakumbi ngeendlela abazisebenzisayo ukusasaza umxholo wabo, zeziphi iindlela, amaqonga kunye neendlela ezifumana ezona zibonelelo zibalaseleyo? LinkedIn Iqela kunye IiNtengiso zeNtengiso kwaye i Institute Marketing Marketing Institute ukuphendula lo mbuzo, kwaye uqhekeze imeko yangoku.
Idatha ibonisa ukuba i-73% yabathengisi benza umxholo ongaphezulu emva koko benza kunyaka ophelileyo kwaye abathengisi abaphumeleleyo kakhulu bakhuthaza umxholo wabo kumaqonga eendaba ezentlalo angama-7, kuthelekiswa ne-4 kuphela esetyenziswa ngamaqela angasebenzi kakuhle. I-infographics ibonisa esinye sezona zicwangciso ziyimpumelelo, ikhula ekuthandeni nge-51% yabathengisi be-B2B kulo nyaka, inyuke nge-13% ukusukela kunyaka ongaphambili. I-91% yabathengisi be-B2B bakhetha ukukhuthaza umxholo wabo kwi-LinkedIn, kulandele i-Twitter kwi-85%. Fumana ukuba ngawaphi amaqhinga okuthengisa omxholo we-B2B abasebenzisa kakhulu kwaye bakholelwa ukuba zezona zisebenza ngoku kwi-infographic ngezantsi.
tags: Ukuthengisa umxholo we-b2bidatha ye-b2bb2b infographicUkuThengiswa kweMpahlakwi-infographicurhwebo
Unxantathu woPhuculo lweWebhu
Tickle & Woo Ithemba lakho!
Nov 14, 2013 kwi-9: 48 AM
Kelsey, idatha entle apha !! Iposi elinolwazi kakhulu lokunceda abanye abathengisi ukuba babone ukuba yintoni ephezulu yabathengisi beklasi abayenzayo ngokufanelekileyo !!
Novemba 14, 2013 ngo-8: 36 PM
Enkosi kakhulu! Ndonwabile uyonwabele iposti kunye nomzobo.